Written by ခိုင်ခိုင်စေလွင်
နာရီမပတ်ပဲ နေခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ ပြန်ကြည့်လိုက်တာ ငွေရတု သက်တမ်းတောင် ရောက်နေပါပေါ့လား။ ကျမက နာရီပတ်ရတာ မကြိုက်၊ အခုနောက်ပိုင်း န...
၂၀၁၆ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ နဝဒေးလမ်းက Think art Gallery မှာ ပြနေတဲ့ MPP ရဲမြင့် ရဲ့ ဗန်ဂိုး ပုဂံကိုအလည်လာခြင်း ပြပွဲကို ရောက်သွားပါတယ်။ အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ရတဲ့ ကိုယ်တွေရှေ့ က အနုပညာရှင် ကိုရ...
Written by ဥာဏ်မျိုးထက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလှတရားတွေထဲမှာ တောတောင်ရေမြေသာဘာဝတွေကြောင့်လည်းပါပါတယ်ဆိုရင် ငြင်းဆိုစရာအကြောင်းမရှိပါ။ ပထ၀ီဘာသာရပ်မှာ သစ်ပင်အချင်းချင်း သတ္တ၀ါအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပြီး အမှီသဟဲပြုနေထိုင်...
Written by သိန်းသန်းဦး
ဝေးလံသောအရပ်မှ ရေစီးသံလို အသံသဲ့သဲ့ ကြားနေရသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးက ညဖြစ်လေသလား မသိ မှောင်မှောင်မဲမဲ။ အရင်းတုတ်ကာ အဖျားသွယ်သွားသော အမျိုးအမည်မသိ ပင်အုပ်ကြီးများနှင့် တော၏အလယ်ခေါင်တွင် က...
သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ အမိန်ဖြင့် အကျဉ်းသား ၆၅၁ ဦးအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးလိုက်ကြောင်း ယနေ့ ညနေ ၆ နာရီသတင်းတွင် ကြေညာသွားပါသည်။ အကျဉ်းသား၊ အကျဉ်းသူ ၆၅၁ ဦး ကို ဇန်န၀ါရီလ ၁၃ ရက်...
Written by ရွှေကိုင်းသား
မြန်မာမှုသုတေသီ ဆရာတော်ရွှေကိုင်းသားရာပြည့်အမှတ်တရ (၁၉၁၂ ဇန်နဝါရီ ၅) '' .... ဦးပဉ္စင်းဟာ ဒီဆင်ယင်ထုံးဖွဲ့မှုစာအုပ်ကိုတတ်သိ နားလည်လှ၍ ပြုစုလိုက်ရသည် မဟုတ်ဘဲ သုတေသီတယောက်အနေနဲ့ သု...
Written by ချဲလင်း
အသကျတဈခကျြနဲ့ တဈခကျြ ရှူရှိုကျခွငျးအမှုမှာ တူညီမှုတှနေဲ့အတူ ကှဲပွားမှုတှကေို ခံစားသိတတျလာသလို။ မရရောမှုတှထေဲမှာ စိတျခမျြးမွစေ့ရာတှကေို ကြောကျတူးသမားလို၊ ရမေဆေးရှာနသေူလို၊ မနကျဖွနျမှာ ဒီနာရီပိုငျးအ...
Written by မန်းနီတိုး
ပါစကယ်ခူးသွယ်ရဲ့ From the land of Green ghosts ကို ဘာသာပြန်ထားတဲ့ ဆရာသင့်လူရဲ့ 'အိုဘယ့်အစိမ်းတို့မြေ' ကို ဖတ်ရင်း ငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းတွေ သတိရတယ် ...
မနေ့ ညနေက ထမင်းစားအပြီး အပြင်ကို ခဏ လမ်းထွက်လျှောက်တယ် ။ ဗမာပြည်မှာ သင်္ကြန် အတက်နေ့ ဆိုတော့ ရေပက်ကြ တီးကြ ဆိုကြ ကကြနဲ့ပျော်လို့ ဆူလို့ရှိကြ...